२०७८ साउन १२ मङ्गलवार
काँग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाबारे छलफल हुने
स्वतन्त्र मधेश जनमत पार्टीको माग होइन : डा. राउत
मन्दिरको सुन चोरी : सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्षसहित सात जना प्रहरी नियन्त्रणमा
इजरायल रोजगारीको लागि आवेदन खुल्यो, तलब मासिक २ लाख
भारतमा ३० हजार संक्रमित, ४१५ संक्रमितको मृत्यु
‘इमोस्नल कार्ड’ खेलेको भन्दै दिपीकालाई गालीको वर्षा ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
गृहपेज » मनोरंजन »
‘इमोस्नल कार्ड’ खेलेको भन्दै दिपीकालाई गालीको वर्षा !
शनिबारको दिन बलिउडका तीन अभिनेत्रीका लागि निकै भारी रह्यो । एकातिर नारर्कोटिक्स सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी) ले एक्सन मोडमा दीपिका–सारा–श्रद्धासँग लगातार सोधपुछ गर्यो भने अर्कोतर्फ दीपिका–सारा–रकुलको मोबाइल जफतसमेत गर्यो ।
भारतीय मिडियाले आफ्नो एक समाचारमा सोधपुछका क्रममा दीपिका तीनपटक रोएको बताएको छ । त्यसपछि एनसीबीले उनलाई ‘इमोस्नल कार्ड’ नखेल्न अनुरोध गरेको इन्डिया टूडेमा समाचार उल्लेख छ ।उनी रोएपछि ‘इमोस्नल कार्ड’ खेलेको भन्दै सोसल मिडिया युजरले गाली गरिरहेका छन् । दिपीकाको पति अभिनेता रणवीर सिंहले दिपीका डराउने भन्दै आफुलाई पनि बस्न दिन अनुरोध गरेका थिए । तर उनको कुराको सुनुवाइ भएन ।
यसअघि एक ह्वाट्सएप ग्रुपमा ला’गूऔषधको प्रयोगबारे संवादमा दिपिकाको पनि मेसेज गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । साढे पाँच घण्टासम्म चलेको सोधपुछमा दीपिकालाई सु’शान्त सिं’ह राजपूत वा रिया’सम्बन्धि केही पनि प्रश्न सोधिएन । एनसीबीको सबै ध्यान दीपिकाको क’रिश्मा’सँग ड्र’ग्स’बारे गरिएको कुराकानीमा मात्रै केन्द्रीत थियो । च्याटमा जुन ड्रग्सबारे कुरा भइरहेको थियो, आफू त्यसको हि’स्सा भएको उनले स्विकार गरेकी छिन् ।
एनसीबीको बयानमा ह्वाटसाप च्याट गरेको स्विकारे पनि ला’गूऔषध उपभोग र कारोबार आफूले नगरेको बताइन् । दिपिकालाई पाँच घण्टा सोधपुछ गरिएको थियो । सु’शा’न्तसिंह रा’जपुतको मृ’त्युबारे भने उनलाई केही प्रश्‍न सोधिएन ।
अभिनेत्री श्रद्धाले पनि एनसीबीको अगाडि ला’गूऔ’षध उपभोग नगर्ने बयान दिइन् । ६ घण्टाको सोधपुछपछि उनी घर फर्किएकी थिइन् । साराअलीले आफूले चुरोट सेवन गरे पनि ला गूऔ षध उपभोग नगर्ने बताइन् ।
‘केदारनाथ’को छायांकनको समयमा सु’शान्तसँग नजिक भएको पनि बताइन् । एनसीबी र ड्र’ग्स मामिलाको कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण र प्रशारण नगर्न रकुलले दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी छिन् ।
राजको बिरुद्धमा मुद्दा हालेकी पुनमले भनिन्, ‘शिल्पा र बच्चाको अवस्था कस्तो होला’
बाबुरामलाई देखाउन पशुपतिमा चढाइयो १ सय लिटर दूध
आफ्नै कर्मचारीले धोका दिएपछि नराम्रोसँग फसे राज !
विदेश जाने नागरिकले काठमाडौंको २ स्थानबाट खोप लगाउन सक्ने
कक्षा १२ को परीक्षा : भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा दिन तयार छैनन् विद्यार्थी
२५ जनाको निधन नयाँ सङ्क्रमित निको हुनेभन्दा दोब्बर बढी
शक्तिमानले भने, ‘बुढाको सबै कुरा बुढीलाई थाहा हुन्छ, शिल्पाको नाटक हो’
राखीले भनिन्, ‘शिल्पाको खुशीमा जल्नेहरुले नै षडयन्त्र गरे’
लकडाउनले विवाह रोकियो भन्दै रुदैँ लाइभमा आएकी मियाले गरिन् सम्बन्धबिच्छेद
बिग बोस अभिनेत्री यशिका कार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते, साथीको घटनास्थलमै मृत्यु
आजको मौसम पाँच प्रदेशमा ‘भारी वर्षा’ को सम्भावना, सतर्क रहन आह्वान
सुनिल शर्मा अब चार अस्पतालका धनी : २०० करोडमा किने नेपालगन्ज अस्पताल
राज कुन्द्रालाई राहत : सँगै काम गरेको अभिनेत्रीले गरिन् खुलासा
निर्णायक परिवर्तन गरेर ‘नेपाल आइडल’ को चौथो सिजन शुरु हुदैँ